होटल सारथीको पाँचौं बार्षिक साधारण सभा, १८ महिनाभित्र अर्को नयाँ भवन बन्ने « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
होटल सारथीको पाँचौं बार्षिक साधारण सभा, १८ महिनाभित्र अर्को नयाँ भवन बन्ने
प्रकाशित मिति : २०७६, २० पुस आईतबार
धुलिखेल, २० पुसः काभ्रेको धुलिखेलमा रहेको होटल सारथी प्रा. लिको पाँचौ बार्षिक साधारण सभा सकिएको छ । शनिबार भएको बार्षिक साधारण सभामा प्रा.लि. का अध्यक्ष प्रल्हाद प्यकुरेलले पर्यटन बर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न खालका योजनाहरु साधारण प्रस्तुत गरेका थिए ।
धुलिखेल तथा आसपासमा रहेका यूवाहरुबाट २५ करोडको लागनीमा ९ महिनाअघि देखि होटल सुरु गरिएको थियो । धुलिखेलमा उत्कृष्ट होटलको रुपमा आफ्नो नाम राख्न सफल भएको उक्त होटलले १८ रोपनी भन्दा बढी आफ्नै जग्गामा व्यवसाय सुरु गरेको हो ।
कार्यक्रममा होटलको हाल सम्मको आम्दानी, खर्च, भावी योजना तथा पर्यन बर्ष २०२० लाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउने नीति सहित शेयर धनीहरुको सुझाव समेत लिएको थियो । विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न शेयर धनीहरु रहनु भएको उक्त होटलमा उद्योगी, व्यवसायी, सहकारीकर्मी, गैह सहकारी निकायका विभिन्न ब्यक्तिको सहभागिता रहेको छ ।
२३ वटा रुम सहित २ सय जनाभन्दा बढीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने सेमिनार हल र २ वटा तालिम हल सहित लिफ्टको समेत व्यवस्था रहेको छ । धुलिखेल बसपार्कबाट १.५ कि. मि.को दुरीमा रहेको होटलबाट विभिन्न हिम श्रृंखलाहरुको दृष्य राम्रोसँग अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
राम्रो पार्किङ स्थल, मनमोहक दृष्य र शान्त वातावरणमा रम्न चाहने जो कोहिलाई पनि एक पटक पुगेपछि जाउँ जाउँ लाग्ने पारिवारिक वातावरण होटल सारथीमा रहेको छ ।
होटलले १८ महिना भित्र सम्पन्न हुने गरी ५० वटा कोठाको अर्कौ भवन निर्माण गर्नका लागि कार्य प्रारम्भ सुरु गरिसकेको छ । ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुने उक्त भवनमा विभिन्न खालका सुविधा सम्पन्न रुमहरु हुनेछन् । साधारणसभाले नयाँ भवनको काम सुरु गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्यिारी समेत दिइसकेको छ ।
नयाँ भवन सुरु भइसकेपछि होटल ७३ वटा रुम सहितको अवस्थामा आउनेछ । यूवाहरु मिलेर आफ्नै माटोमा केहि गरौ भन्ने सोचका साथ सुरु भएको यस होटलले स्थानीयलाई क्षमताका आधारमा रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ ।
अहिले उक्त होटलले ३० जना भन्दा बढी ब्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष रोजागरी दिन सफल भएको छ । होटल सञ्चालन गर्दै आएको समुह अन्तर्गत रहेका सारथी सहकारी, सारथी मार्ट, सारथी फाउण्डेसन तथा अन्य समुदायमा आधारित कार्यक्रमलाई थप ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने पनि साधारणसभाले सभामा पारित गरेको छ ।
फेसबुकको नाम परिवर्तन अव ‘मेटा’ नामबाट संचालन हुने
काठमाडौं, १२ कात्तिक : सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेको छ । फेसबुकको परिवर्तन